တစ်ကိုယ်လုံးအဝါ ‌ရောင်လေးနဲ့ ရင်ဖို ချစ်စရာ အလန်းစား ပုံရိပ်တွေ နဲ့ ဖမ်းစား လိုက် တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ….. – Shwe Naung
တစ်ကိုယ်လုံးအဝါ ‌ရောင်လေးနဲ့ ရင်ဖို ချစ်စရာ အလန်းစား ပုံရိပ်တွေ နဲ့ ဖမ်းစား လိုက် တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ…..
N N | September 2, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ်ကြီး တို့ရဲ့ အချစ်တော် မော်လ်ဒယ် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော ပတ်ထရစ်ရှာ ကတော့ သရုပ်ဆောင် ကောင်းသလို မိန်းကလေး တိုင်း အားကျရလောက်အောင် အချိုးအစား ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှ တရားတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူပါ..။
နိုင်ငံခြားသူ လေးတစ် ယောက်လို ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းပြီး ယောကျ်ားလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးမှု တွေကို အများဆုံး ရရှိ ထားသူတဲ့ သူမကတော့ အခု တစ်ခါ မှာလည်း ညို့အားပြင်းတဲ့ပုံ ရိပ်လေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားလိုက် ပြန်ပါတယ်နော်..။
သူမရဲ့ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေကို အထင်းသား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင် လေးတွေ နဲ့ ညို့ချက်တွေ ပြင်းပြင်း အလန်းစား ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ် တွေကို ဖမ်းစားလိုက်တာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်..။
ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိပြီး မိမိုက် လွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေကတော့ မိန်းကလေး အချင်းချင်းတောင် ကြွေရလောက် အောင် ညို့အားပြင်း နေတာမို့ ပရိသတ်တွေ လည်း အချစ် ပိုနေကြဦးမှာပါနော်.. ။
June တုန်းက ကိုယ့်အခန်း လေးထဲမှာပဲ ကိုယ့်ဘာသာ အမှိုင်းလေး ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ပုံလေးတွေ..” ဆိုပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေကို ပတ်ထရစ်ရှာက ပြန်လည်မျှ ဝေပေးတာပါ..။
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရား တွေကို ထင်ရှား ပေါ်လွင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိလွန်းတဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ ပုံရိပ်လေး တွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေ သဘောကျနေကြမှာပါနော်..။
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ နန်းဆုဦးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး…….
ရွှေကစ်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..
LIVE လေးလွှင့်ကာ GYM ဆော့ ကစားရင်းဆွဲ ဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား တွေပေါ်လွင်ပြီး အသည်းယားစရာ ကောင်းနေတဲ့ စံရတီမိုးမြင့် ရဲ့ ဗီဒီယို..
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး………
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ်ပေးနေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ ချောကလျာရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး……….
ရင်ဖိုစရာ အလန်းစား ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………..